सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई छाडे नेपाल समूह ! Canada Nepal
सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराई छाडे नेपाल समूह !
क्यानाडा नेपाल श्रावण २१ २०७८
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादले नेताहरु कुन क्याम्पमा प्रवेश गरे वा बाहिरिए भन्ने चर्चाले बेलाबखत राजनीतिक वृत्तलाई तताइरहेको छ ।
बिहीबार पनि यस्तै भइरहेको छ । नेकपा एमाले संस्थापन ओली समूह र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा विभाजित भएको छ । नेपाल समूहमा चिनिँदै आएका सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले क्याम्प परिवर्तन गरेको चर्चा भइहरेको छ ।
नेपाल समूहले बिहीबार राखेको बैठकमा सहभागी नभएपछि उनीहरुले क्याम्प परिवर्तन गरेको आशंका गरिएको हो ।
नेपाल समूहमा रहेका उनीहरु गत असार २७ गतेको १० बुँदे सहमतिपछि अलमलमा जस्तो देखिएका थिए । तर, बिहीबारको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि पाण्डे र भट्टराई नेपाल समूह छाडेको भन्दै चर्चा भइरहेको छ ।
तर, कोरोनाको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका कारण पाण्डे र भट्टराई बैठकमा सहभागी नभएको बताइएको छ । यद्यपि, उनीहरुले बैठकमा सहभागी नहुनुको कारण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
श्रावण २१, २०७८ बिहिवार १४:२९:०८ बजे : प्रकाशित